अक्षरमार्ग सिर्जना समूहको चौथो श्रृङ्खला::KhojOnline.com
अक्षरमार्ग सिर्जना समूहले चौमासिक रूपमा संचालन गर्दै आएको सिर्जनालयको चौथो श्रृङ्खलामा रेखाकवि टंक साम्बाहाम्फे, कवि तारा के.सी. र मुक्तककार मीलन समीर सुनिएका छन् ।
लामो समयदेखि साहित्यको कविता विधामा कलम चलाउँदै रेखा कवितालाई स्थापित बनाउन सक्रिय हुँदै आएका आएका रेखाकवि टंक साम्बाहाम्फेले समसामयिक विषयका आधा दर्जन आफ्ना रेखा कविताहरू सुनाएका थिए । त्यस्तै कवि तारा के.सी. ले पनि समसामयिक विषयक आधा दर्जन कविताहरू सुनाए । उनले बा, बुढो मास्टर, प्रिय छोरी लगायतका कविता सुनाइन् । स्याङजाली मुक्तककार मीलन समीरले देशप्रेम, जातिय स्वाभिमान, प्रेमप्रणय जस्ता विषयमा आफ्ना एक दर्जन चोटिला मुक्तकहरू सुनाए ।
ज्ञान विकास पुस्तकालय, काभ्रेको सभाकक्षमा भएको सो कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि साहित्यकार सूर्यप्रसाद लाकोजू, डा. गोपाल पौड्याल मण्डने, खेम पोखरेल, उमेश पाण्डे सिर्जनालयमा प्रस्तुत सिर्जनाहरूका बारेमा आ-आफ्ना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम सिर्जनालयका संयोजक शम्भुलाल श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो
बुध, असार ४, २०७६ मा प्रकाशित